Wasaaradda Caafimaadka Oo Digniin Dirtay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa digniin culus u dirtay Hay’adaha ka shaqeeya arrimaha wacyigalinta gudniinka Fircooniga ah.
Agaasimaga guud ee Wasaaradda Caafimaadka Cabdullaahi Xaashi Cali ayaa sheegay in Wasaarada ay siyaasad ahaan ugu jirto sidii ay u ciribtiri laheyd gudniinka Fircooniga,islamarkaan sheegay in arrimaas ay iska kaashan doonaan Wasaarado badan.
Sidoo kale waxaa uu sheega Agaasimaha in ay jiraan dad badan oo sheeganaya Ha’ado, islamrkaana dhaqaalo ku soo qaatay sidee ay ugu hortigi lahaayeen gudniinka Fircooniga,isag oo dhaliil u jeediyay dadkaasi.
Agaasimaga Guud ee Wasaaradda Caafimaadka Cabdullaahi Xaashi Cali ayaa yiri “waxaa maalin dhaweyd arkaaye qolo dhaheysa waa markii ugu horeysay ee Soomaaliya dhaqaatiir iyo Culimo la isku keenay si loo joojiyo arrimaha gudniinka fircooniga” ayuu yiri Agaasimaha.
Waxaa uu sheegay in sharciyo la diyaariyay, islamarkaana Baarlamaanka la horgeeyay,waxa uu nasiib daro ku timaamay in hay’add walbo dalka iska timaado oo ay ka hadasho arrimaga gudniinka Fircooniga.
Agaasime Xaashi ayaa dardaaran u jeediyay dadka ka hadla arrimaha gudniinka Fircooniga,waxaana uu kula dardaamay in ay la tashiyo la sameeyaa Wasaaradaha ku shaqada leh arrimahaasi.